China excavator ripper emepụta na suppliers | MINYAN
A na-eji ihe dị elu na-eguzogide ihe iji mee ka ihe dị iche iche na-echebe efere, nke nwere ike ịkewapụ ụwa na nkume ma belata nkwụsị ọnwụ. Ọ nwere ike ịtọghe ala siri ike, okwute oyi kpọnwụrụ akpọnwụ, okwute a na-ete mmiri na nkume gbajiri agbaji.
Ripper Main Akụkụ:1). A na-eji ígwè na-eguzogide ọgwụ iji mee ka ogologo oge dịgide nke ripper;2). All nke ripper dị dabere na excavator nlereanya;3). Omenala ọrụ dị, otu eze na ezé abụọ;4). 12 ọnwa akwụkwọ ikike; 5) .Ọgwụ mesoo atụdo.6) .Good ịgbado ọkụ technology.Anyị ozi bụ: Ogo mbụ, Service kasị, na Innovation kasị mkpa. Uncompromising nkwa elu àgwà ma na-eche echiche ọrụ na-enweta anyị ezigbo aha na ndị ọzọ na-abịa mmekọ. Anyị ga-anọgide na-emeziwanye ngwaahịa ndị ka mma iji jeere ụwa ahịa ozi. Anyị na-atụ anya iso gị rụọ ọrụ!
Tụkwasịnụ Ikike:800 Set / ets kwa ọnwa Nkwakọ ngwaahịa & nzipuNkwakọ ngwaahịa nkọwa Mbupụ Okwu Osisi ma ọ bụ dị ka arịrịọ ndị ahịa Nzipu Ihe: Ẹnam ekese na 3-7 ụbọchị mgbe ugwo excavator oké ọrụ ripper
Typedị ngwugwu:1. seaworthy mbupụ ọkọlọtọ ngwugwu, na osisi ma ọ bụ ígwè pallet, osisi katọn, ígwè etiti wdg maka Doosan excavator ripper;2. otu 20GP ike Ibu Ibu banyere 12-14 iberibe 1.0m3 ma ọ bụ 1.2m3 bọket maka Doosan excavator ripper;3. otu 40HC nwere ike ibu ihe 26-28 iberibe 1.0m3 ma ọ bụ 1.2m3 bọket maka Doosan excavator ripper;4. ahaziri ngwugwu maka Doosan excavator ripper.
PortLianyungang, Shanghai ma ọ bụ QingdaEtiti oge :
Ọnụ ọgụgụ (setịpụrụ) 1 - 5 > 5
Anyị na-ahụta mgbe niile Ngwaahịa dị ka Mkpụrụ obi nke ụlọ ọrụ ahụ, na-arapara na ụkpụrụ nke Ọrụ, Innovation and Sustainable Development to be the top Brand in engineering machinery industry. Ọ ga-enye gị Top-ogo oru nkwado, kacha mma ngwaahịa mma na mbara elu ugwu ngwa ọkọnọ na Professional mgbe- ọrụ.
1. Minyan ikike:Anyị bụ ụlọ ọrụ mmepụta ihe, nwee nke anyị Minyan Dept. iji mee ka teknụzụ dị mma. Anyị na-emepụta ngwaahịa ruru eru site na teknụzụ nke anyị.2.Strict àgwà akara usoro:A ọkachamara QC otu na elu ígwè iji hụ na àgwà nke anyị na-magburu onwe.3. Nkà ihe ọmụmaInye onyinye kacha mma na ọnụahịa kachasị mma nye ndị ahịa anyị bụ amamihe anyị ebighi ebi.Ihe 4.Rawnchịkọta: A ogologo oge imekọ ihe ọnụ mmekọrịta na-nọ na-eru eru suppliers nke ngwaọrụ, nke ana achi achi elu àgwà nke anyịngwaahịa site na nzọụkwụ 1.5.na-arụ ọrụ igwe nkwado:Series nke dị ígwè na-ọtụtụ-eji n'oge anyị mmepụta. Nke a bụ ihe dị mkpa maka ngwaike maka ụlọ ọrụ mepụtara.6.Steady akụkụ ahụ mapụtara ọkọnọ: Anyị na-ewepụta bọket niile na-ekpochapu ihe, ya mere etinyere usoro ntinye akụkụ a pụrụ ịdabere na ya.7. Nhọrọ dịgasị iche iche maka ndị na-egwupụta ihe dị iche iche:Ndị gwupụtara ala si na 0.8ton ruo 55ton. Enwere ike itinye akwụkwọ anyị maka ụdị excavator niile.8.Exinging ahụmahụ:Otu ndị ahịa ọkachamara na-akwalite ndị na-agbaji anyị na mba 50 karịa ụwa.
Ọ bụrụ na ị nwere mmasị na ngwaahịa anyị, biko kpọtụrụ m.
Ana m atụ anya ịbụ onye gị na ya ga-ebi ogologo oge.
Ngwa nke Excavator RipperRipping ala siri ike dị ka ala weathered na nkume, tundra wdgKwesịrị ekwesị maka ọtụtụ ụdị ika na ihe atụ nke excavator: KOMATSU, KOBELCO, HITACHI, KATO, SUMITOMO, CAT, HYUNDAI, DAEWOO, CASE, DOOSAN, VOLVO, JCB, JHON DEERE, KUBOTA, LIEBHERR, SANY, wdg.
Ọrụ anyị1.Pre-ire ọrụ: a: Chepụta ahaziri oru maka ndị ahịa.b: Chepụta ma rụpụta ngwaahịa dịka ndị ahịa chọrọ pụrụ iche.c: Zụọ ndị ọrụ ntanetị maka ndị ahịa.2. Ọrụ n'oge ire:a: Nyere ndị ahịa aka ịchọta ndị na-ebufe ibu ezi uche dị na hatupu nnyefe.b: Nyere ndi ahia aka ise atumatu idozi.3. Mgbe-ire ọrụ:a: Nyere ndị ahịa aka ịkwadebe maka atụmatụ atụmatụ ụlọ.b: Wụnye na debug akụrụngwa.c: Zụọ ndị na-arụ ọrụ nke mbụ.d: Nyochaa akụrụngwaMgbe ire-ahịa: 24 awa online oru nkwado ọrụ dị;Ahaziri ọrụ: ngwaahịa ahaziri dị ka ndị ahịa chọrọ;Nkwa: ọnwa iri na abụọ mgbe ị natachara ngwaahịa a.
ohuru ohuru nke DH500 Doosan excavator ripper mgbakwunye maka ire ere1. excavator ripper nlereanya mba.: Doosan DH5002. excavator ripper ihe: Q345B + NM400 ma ọ bụ ahaziri3. excavator ripper unit ibu: banyere 920kg4. Ahaziri rippers bụ ọpụrụiche anyị5. Ndị ahịa anyị bụ Ecuador, America, Panama, Russia, Australia, New zeland, Thailand, Singapore wdg 6. ohuru DH500 Doosan excavator ripper mgbakwunye maka ire ere emere na China
excavator ripper nlereanya mba. Doosan DH500
excavator ripper aha ohuru ohuru nke DH500 Doosan excavator ripper mgbakwunye maka ire ere
excavator ripper ihe Q345B + NM400 ma ọ bụ ahaziri
agba agba agba agba agba oroma ma ọ bụ ahaziri
excavator ripper unit ibu ibu banyere 920kg
excavator ripper ezé akụkụ mba. EBUA (4T5502)
excavator ripper n'akụkụ nchebe akụkụ no. 9W8365
Nkpu ngwugwu ngwugwu ihe nkpuchi ihe dị ka 2.2m3
ngwugwu ngwugwu ngwugwu pallet osisi
excavator ripper si malite emebere na China
Onye na-egwu iheA: ezé dị arọ ezé arụpụtara ezé nwere ike iji dochie ezé iji hụ na nsonaazụ kachasị mma na iyi mgbochi; B: Onye na-eche nche imi iji ndụD: Mee ka e nwee ike meziwanye ihe niile, gbochie ozu ahụ iche na ntị ntị
Onye na-egwu ihe
Minyan ịwụ bụ a factory nwere ihe ahụmahụ na-eme Excavator mgbakwunye, nwere anyị onwe injinịa otu, ahịa otu, mbukota & loading otu, na 80 ọrụ na-akwụ 100% anya na-ewu 100% ezi mma ngwaahịa
Companylọ ọrụ anyị: XUZHOU MINYAN Bubata & Mbupụ CO., LTD
Ọnọdụ anyị: Xuzhou Jiangsu ógbè, nnukwu ewu ígwè isi na China.
Ngwaahịa anyị: ỌR EX AKW BKWỌ AKW ,KWỌ, ỌR E AKWVKWỌ AKWMKWỌ AKW ,KWỌ, AKW SKWỌ AKW BKWỌ AKW ,KWỌ, AKW TKWỌ TEETH, ỌR EX AKW ,KWỌ AKW productsKWỌ, ngwaahịa anyị dabara maka ụdị ụdị excavator niile. Dị ka nwamba, XCMG, KOMATSU, BOBCAT, SHANTUI, HYUNDAI…
Ọnọdụ ndị ahịa anyị: Australia, America, Canada, Panama, Brazil, Peru, Ecuador, Uruguay, Paraguay, Russia, Sweden, Norway, Chile, France, Algeria, Angola, South Africa, India, Sri Lanka, Myanmar, Thailand, Singapore, Philippines na ndị ọzọ.
Anyị anaghị akwụsị mma, chọrọ ịbụ ndị kachasị mma na ụlọ ọrụ a, ka ị bụrụ onye ntụkwasị obi na-arụpụta ihe ịwụ.
Nke gara aga: bọket ikwapu bọket
Osote: excavator sikwuo ike ịrụ ọrụ ịwụ